Midowga Afrika oo ka digaya in 6,000 oo Daacish ah ku soo laabanayaan Qaaradda | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Midowga Afrika oo ka digaya in 6,000 oo Daacish ah ku soo laabanayaan Qaaradda
December 11, 2017	19 Views
Ururka Midowga Afrika ayaa ka digay in Qaaradda ay ku soo laabtaan lix kun oo dhallinayro Afrikaan ah kuwaas oo ka mid ah 30,000 oo Ajaanib ah kuna biiray Daacish intii u dhaxeysay 2014kii ilaa Sanadkii 2016kii.
Madaxda Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika Smail Chergui ayaa Magaalada Algiers s ee Dalka Algeria ka sheegay in Guddiga amniga Midowga AFrika uu hayo xogta la xiriirta in dhallinyaradii Afrika ee ku biiray Daacish ay Qaaradda ku soo laabanayaan iyaga oo wlai wata fikirka daacish ee dagaalka ku dhisan.
Waddamada Qaaradda Afrika ayuu ugu baaqay in ay xoojiyaan xiriirkooda dhinaca amniga iyo sirdoonka si dhowna isula shaqeeyaan si looga hortago in Dhallinyarada Afrika ee ku biiray Daacish ay dhibaato ka geystaan gudaha Qaaradda Afrika gaar ahaan Waddamada ay ka soo jeedaan.
Ururka Daacish ayaa lagu jebiyay dagaalkii dalalka Ciraaq iyo Syria waxaana hadda la sheegayaa in dagaallamayaasha Ajanabiga ah ee u dagaallamayay ay ku laabanayaan dalalkii ay ka soo jeedeen iyaga oo wata fikirka Daacish,iyaga oo qatar ku ah amniga Dalalkooda.
Dowladda Ciraaq ayaa maalintii doraad ahayd ku dhawaaqday in uu dhamaaday dagaalkii Dowladdu kula jirtay Daacish islamarkaan Ciidamada Ciraaq ay si buuxda gacanta ugu hayaan dhamaan xudduudaha Dalka Ciraaq.
Dhinaca Syria,Ruushak ayaa isagana ku dhawaaqay in uu afjaray dagaalkii uu ka waday dalkaas ee uu kula jiray Daacish waxaana uu xusay in Ururkaas uu ku jebiyay gudaha Dalka Syria.